Tag: zvinongedzo | Martech Zone
Iyo Backlink: Tsananguro, Direction, uye Njodzi
Svondo, Gunyana 20, 2015 Muvhuro, September 21, 2015 Douglas Karr
Kutaura chokwadi, pandinonzwa mumwe munhu achitaura izwi backlink sechikamu chehurongwa hwese ini ndinowanzo tenderera. Ini ndichatsanangura kuti sei kuburikidza neichi posvo asi uchida kutanga neimwe nhoroondo. Pane imwe nguva, injini dzekutsvaga dzaimbove hombe madhairekitori ayo ainyanya kuvakwa uye akarairwa zvakanyanya senge dhairekitori. Google's Pagerank Algorithm yakachinja mamiriro ekutsvaga nekuti vakashandisa zvinongedzo sehuremu hwekukosha. Chibvumirano chakajairika chinotarisa
NeChishanu, Gumiguru 18, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Nepo nheyo dzekuvaka saiti dzichiri kutamba, ndizvo zvirimo izvo zvino zvinobudirira kutyaira kubudirira kumakambani anoisa mari munzira huru dzekutengesa. Makambani mazhinji akaisa mari zvakanyanya mukutsvaga kwekutsvaga akaona mari idzi dzakarasika… asi makambani akaramba achitsvaga zviripo, zvakawandisa uye zvemazuva ano zvakapa kukosha kune vateereri vavo vachiramba vachiona mibairo. Wakagadzirira nyika nyowani yekutsvagisa injini,